QM oo sheegtay in ay korortay tirada Haweenka iyo Caruurta ay askareyaan Al-Shabaab. | Somsoon
Home WARAR QM oo sheegtay in ay korortay tirada Haweenka iyo Caruurta ay askareyaan...
QM oo sheegtay in ay korortay tirada Haweenka iyo Caruurta ay askareyaan Al-Shabaab.
Hay’adda Qaramada Midoobe u qaabilsan dhanka caruurta ee (UNICEF) ayaa sheegtay in boqolaal caruur ah lagu askareeyay gudaha Soomaaliya kuwaasi oo bankood ay askareeyeen kooxaha hubaysan ee dalka ku sugan sida dagaalamyaasha al-Shabaab.
Ugu yaraan 869 caruur ah ayaa la askareeyay sida sida lagu sheegay warbixinta ay soo saartay hay’adda UNICEF.
Sideed kamid ah caruurta la askareeyay ayaa lasheegay in si qasab ah lagu shaqaalaysiiyay intii u dhaxeesay bilihii January illaa July guud ahaan sideedaas caruur ah ayaana lagu sheegay in dhamaantood ay yihiin gabdho..
Al-Shabaab oo qaybo badan oo dalka kamid ah ku sugan ayaa warbixintu sheegtay in 81 boqolkiiba in ay caruurta shaqaaleesiiyeen.
Ololaha lagu askareenayo caruurta ayay UNICEF ku doodaysaa in uu ka socdo qaybo badan oo dalka kamid ah sida bartamaha dalka, koonfurta iyo qaybo kamid ah maamulka Puntland.
Talaabooyinka wanaagsan oo ay sameesay hay’adda Qaramada Midoobe u qaabilsan dhanka caruurta ee UNICEF ayay ku sheegtay in ay tahay xanaaneen ay u sameesay 513 caruur ah oo 47 kamid ay yihiin gabdho oo kasoo goostay al-Shabaab.
Tan iyo sanadkii 1990’meeyadii markii ay meesha ka baxday dowladii uu hogaaminayay General Mohamed Siad Barre waxaa gudaha dalka ka dhacay dagaalo u badan qabali kuwaas oo qaar badan oo kamid ah loo adeegsaday caruur.
Laga soo bilaabo sanadkii 2006’diina waxaa is badalay wajiga uu lahaa dagaaladii dalka soo maray iyagoona dagaalada ay isku badalaeen kuwo ku saleesan diin.
Dowladda Soomaaliya oo garab ka heleesa ciidamada nabad ilaalinta midowga afrika ee Amisom ayaana tan iyo waqtigaas gudaha dalka kula dirireesay kooxaha hubaysan ee dalka ku sugan oo ay ugu wayntahay al-Shabaab.
Article horeMadaxwaynihii hore ee Koonfur Afrika Jacob Zuma oo Maxkamadd la soo taagayo.
Article socoda Axmed Madoobe oo ka horyimid isbaheysi siyaasadeed oo ay qorsheynayeen madaxdii ka qeybgashay caleema saarkiisa.